Mametraha fanontaniana matetika:
1.Aiza ny orinasa misy anao?
Ny orinasanay miorina ao amin'ny tanànan'i NanChang, faritanin'i JiangXi. It dia manodidina ny adiny 3 amin'ny CRH avy any Shanghai ka hatrany NanChang. And 15 minitra mankany amin'ny ozininay. Ny biraon'ny varotra misy anay dia mipetraka any NanChang City, izay renivohitry ny faritanin'i JiangXi.
2. Firy ny mpiasa ao amin'ny orinasa misy anao?
Rehefa afaka 10 taona fampandrosoana haingana dia manana mpiasa maherin'ny 200 ao amin'ny orinasa izahay. Ary manao plating ao an-trano izahay. Mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra sy ny fotoana famokarana.
3, raha misy santionany?
Faly izahay manome santionany ho anao hijerena kalitao sy fahaiza-miasa. Ny politikan'ny orinasanay dia mila mandoa ny vidin'ny entana ihany ianao. Raha manana tahiry isika dia tsy andoavam-bola ny vidin'ny santionany.
4, Raha misy OEM?
Eny, matanjaka tokoa isika amin'ny R&D. tongasoa OEM kaomandy. Ary ny MOQ dia: 100K pcs isaky ny habeny.
Alefaso fotsiny izahay santionany OR teknolojia. sary, ary mandoa ny vidin'ny fitaovana, azontsika atao ny mamita azy ireo ao anatin'ny 20-30 andro. Ary ny vidin'ny fitaovana dia haverina raha vantany vao manomboka kaomandy.
5, raha afaka mividy fanjonoana hafa amin'ny orinasanao aho?
Miala tsiny, orinasa mpametaka Hook izahay, ny afon'ny matauza fanjonoana ihany no ifantohantsika.
6, Inona avy ireo fepetra fandoavam-bola mahazatra an'ny orinasao?
Manaiky T / T izahay (30-50% T / T mialoha ny famokarana, ary mandanjalanja alohan'ny fandefasana)
sy L / C.
7, Inona ny teny fanondranana ara-dalàna ataon'ny orinasanao?
Matetika izahay manondrana amin'ny Ex-W na FOB.
8.Afaka ataoko manokana ve ilay fonosana?
Eny, azonao atao ny mandefa anay sary ny fonosana na mandefa anay ireo entana fonosana, manangona entana ho anao izahay.
Na mampiasa ny fonosana marika KONA dia OK. Azafady zahao ny rohy eto ambany hijerena ny fanangonana ny fonosana KONA.
Makà toromarika fonosana
9.Marina hoatrinona ny fanaterana?
Miankina amin'ny farango nanafatrao izany. Matetika ho an'ny varotra varotra mafana, dia hanomana tahiry ho anao izahay, raha mila fonosana betsaka, azo alefa aminao ny ampitso. Fa raha mila mamokatra ho anao dia maharitra 60-120 andro. Arakaraka. Azafady alefaso aminay ny mailaka momba ny zavatra takianay amin'ny ankizivavinay, hanome fotoana fitarihana marina ho anao izy ireo.